သွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး, Standard သွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး, တရုတ်အတွက်အလိုအလျောက်သွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါးထုတ်လုပ်သူ
ဖေါ်ပြချက်:သွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး,စံသွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး,အလိုအလျောက်သွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး,သံမဏိကြိတ်စက် Shutter ကို Safe တံခါး,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > roller Shutter တံခါး > သွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး
သွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, သွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး, စံသွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, အလိုအလျောက်သွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
သံမဏိကြိတ်စက် Shutter ကို Safe ဂိုဒေါင်တံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက်စံသွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သံမဏိကြိတ်စက် Shutter ကို Safe ဂိုဒေါင်တံခါး သံမဏိကြိတ်စက် Shutter ကို Safe ဂိုဒေါင်တံခါးကို manual, လျှပ်စစ်နှင့်ဝေးလံခေါင်သီ-controlled အလိုအလျောက်သော့ခတ်ကိရိယာနှင့်အတူ incluses စစ်ဆင်ရေးနည်းလမ်းများချီတက်ခဲ့ကြသည်။...
အလိုအလျောက်စံသွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး 1. ဤသည်ကြိတ်စက်ရှပ်တာ slats ရာကိုပိုပြီးအားကောင်းနှင့်ခံနိုင်ရည် prying ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်နှင့်အတူပူ extrusion ဖြင့်ပုံဖော်ထားသည်။ 2. ဒီသစ်ကိုလှိမ့ရှပ်တာပစ္စည်းနှင့် struction...
တရုတ်နိုင်ငံ သွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး ပေးသွင်း
အဆင့်မြင့်ပူ-သို့ကျဆင်းလာအားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီးပစ္စည်းများ, ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုဖွဲ့စည်းတိကျစွာလိပ်, တံခါးကိုအတွင်းမှ hydrofluorocarbon ၏အခမဲ့ polyurethane အမြှုပ်, အလင်းအလေးချိန်မြင့်မားခွန်အားအသွင်အပြင်ကောင်းတဲ့အသုံးပြုခြင်း။ တံခါးတမ်ပါ anti-theft, ဆူညံသံအထီးကျန်မှုတွေအပူလျှပ်ကာနှင့်ချေးခုခံ၏အားသာချက်များရှိသည် ဖြစ်. , တံခါးကျယ်ပြန့်စသည်တို့ကို, စျေးဆိုင်, ကားဂိုဒေါင်, အိမ်များ, စူပါမားကက်, ကုန်လှောင်ရုံများနှင့်စက်မှုအပင်များတွင်အသုံးပြုကြသည်။
အဆိုပါအဆောက်အဦ၏ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ် မူတည်. ကျွန်တော်တံခါးများဖွင့်လှိမ့်ပြီးနောက်တံခါးအထက်ပိုင်းနေ, ဒီကားဂိုဒေါင်အာကာသကယ်တင်နိုင်နှင့်လည်းကာကွယ်ဆေးအားဖြင့်သန့်ရှင်းလှပသောကားဂိုဒေါင်စောင့်ရှောက်နိုင်, အတွင်းပိုင်းအပြင်ပန်းနှင့်အလယ်အလတ်သုံးခုကွဲပြားခြားနားသောတပ်ဆင်ခြင်းနည်းလမ်းများရှေးခယျြနိုငျ ကားဂိုဒေါင်သို့သွားရွှံ့, မိုးနှင့်ဆီးနှင်း, etc ။
သွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး စံသွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး အလိုအလျောက်သွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး သံမဏိကြိတ်စက် Shutter ကို Safe တံခါး သွပ်ရည်စိမ်ကြိတ်စက် Shutter